Calaamadda Haaruun: 1 Sac, 2 Orgi - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waxaan aragnay in Calaamada Muuse 2 in ammarka lagu siiyay Buurta Siinaay ay ahaayeen kuwo aad u ba’an. Dhamaadkii maqaalkaas waa annigii kugu casuumay in aad adigu isweydiiso (Sababtoo ah tani waa ujeeddada Sharciga) Haddii aad mar walba xajisid ammaradda ama aadan. Haddii adigu aadan mar walba aadan xajisan Sharciga adigu, sida aan annigu aan ku jiraan dhibaato halis ah – qiilqiil Qiyaame. Tani walwal malahan haddii aad mar walba aad xajisatid Sharciga, laakiin haddii aad ku guul dareysato in sidaas la sameeyo maxaa la samayn karaa? Waxay ahayd Haaruun (sidoo kale loogu yeedhay Haaruun, ee Muuse walaalkiis), iyo faraciisa yaa ka hadlay maamulida allabariga – iyo kuwaasoo dadkuna allabaryey, ama daboolay, oo dembaabay. Haaruun wuxuu lahaa laba allabari gaar ahaan muhiim u ah in ay ahaayeen Calaamadaha in la fahmo sida Ilaah u dabooli lahaa dembiyadooda ka go’an kala jejebintii Sharciga. Kuwaasu waxay ahaayeen allabariga saca iyo labada orgi. Bal aan ka biloowno orgigga.
Casaaseel iyo maalinta kafaaraggudka
Ka timid Muuse Calaamada 1 Iidda Kormaridda ahaa (oo weli ah!) una dabaaldega dadka Yuhuudda ah si ay u xasuustaan samatabbixintii looga badbaadiyay Fircoon. Laakiin Tawreedka ayaa sidoo kale amray ciidaha kale. Mid muhiimad gaar ah leh waxaa la odhan jiray maalinta kafaaraggudka. Halkan Riix si aad u akhriso si buuxda Tawreedka oo dhamaystirran. Maxaa tilmaamaha si taxadar leh oo faahfaahsan siiyey maalinta kafaaraggudka? Waxaan arki karnaa sida ay u bilaabmeen:
RABBIGU Muuse ayuu la hadlay kadib dhimashadii ka mid ahaa labada wiil ee Haaruun ku dhintay markay RABBIGA ku soo dhawaadeen dabadeed. RABBIGU wuxuu Muuse ku yidhi, “Oo markii Haaruun labadiisii wiil ay Rabbiga hortiisa u soo dhowaadeen oo ay dhinteen dabadeed ayaa Rabbigu Muuse la hadlay, 2 oo wuxuu Muuse ku yidhi, Walaalkaa Haaruun la hadal si uusan goor walba u soo gelin meesha quduuska ah oo ilxidhka ka shishaysa gudaheeda, oo ka soo hor jeedda daboolka sanduuqa kor saaran, yuusan dhimane, waayo, anigu waxaan ka dhex muuqan doonaa daruurta kor saaran daboolka.” Laawiyiintii 16:1-2
Wixii dhacay, waxay ahaayeen, waxay ka hor dhaceen labada will ee Haaruun oo dhintey ka dib markii ay wax qamaam galay teendhadii halkaas oo agtiisa Rabbiga tiil. Laakiin In hortiisa Quduuska ah, ay ku fashilmeen in ay si buuxda u dhawraan sharciga (sida aan ku aragnay halkan) waxa ay keentay dhimashadooda. Waa maxay sababtu? In teendhadu ahaa Sanduuqii Axdiga. Quraanka waxa uu sidoo kale carrabaabay Sanduuqii Axdiga. Waxa uu leeyahay
“Nabigoodii wuxuu ku yidhi calaamadda xukunkiisu waa inay u timaado taabud (sanduuq) oy ku jirto xasiloonida Eebihiin iyo wax ka soo hadhay waxay ka tageen ehelkii Muuse iyo ehelkii Haaruun oo Mala’igtu xambaari arrintaasna calaamaa idiinku sugan haddaad tihiin Mu’miniin.”
Suurat Al-Baqarah 2:248
Sida ay leedahay, ‘Sanduuqii Axdiga’ ahayd Calaamo oo amar maxaa yeelay, Sanduuqii ahayd calaamad axdiga oo ka mid ah Sharciga Muuse. Loox oo dhagax ah ayaa lagu kaydiyey Tobanka Amar oo ku hayay Sanduuqii. Oo qof kasta oo ku fashilmay in ay sii xajistaan Sharciga oo dhan – joogitaanka Sanduuqan – waa dhiman lahaa. Labadda wiil ee ugu horeeya Haaruun baa dhintey ka dib markii ay soo galeen teendhada. Sidaas awgeed tilmaamaha si taxadar leh baa la siiyey, oo ay ka mid ahayd ammarka in ay jirto oo kaliya maalin maalmaha ka mid ah sannadka oo dhan in Haaruun geli doono teendhada – Maalinta kafaaraggudka. Haddii uu soo galay maalin kasta oo kale isaguna waa uu dhiman doonaa. Laakiin xitaa haduu maalin uun, ka hor inta uusan Haaruun gelin joogitaanka Sanduuqii Axdiga, wuxuu lahaa
“Oo Haaruun waa inuu keenaa dibiga qurbaanka dembiga ah oo uu nafsaddiisa u bixinayo, oo waa inuu nafsaddiisa iyo reerkiisaba kafaaraggud u sameeyaa…. 13 Oo waa inuu fooxa ku shubaa dabka Rabbiga hortiisa yaal, si fooxa qiiqiisu u qariyo daboolka sanduuqa markhaatiga kor saaran, yuusan dhimane.” Laawiyiintii 16:6,13
Sidaas dibi waxaa ku allabaryi jiray si ay u daboosho, ama gudo, dembiyadii Haaruun ee u gaarka ahaa kana dhanka ahaa Sharciga uu jabiyay. Ka dibna isla markiiba ka dib, Haaruun waxa uu sameeyay xaflad cajiib ah oo Casaaseel.
“Oo waa inuu labada orgi soo kexeeyaa, oo uu soo taagaa meel Rabbiga hortiisa ah oo iridda teendhada shirka u dhow. 8 Oo markaas Haaruun waa inuu labada orgi saami u kala ridaa, oo saami kan Rabbiga ha ahaado, saamiga kalena kan Casaaseel ha ahaado. 9 Oo orgigii saamigu ugu dhacay Rabbiga, Haaruun waa inuu keenaa, oo qurbaan dembi u bixiyaa.”
Marka dibiga lagu allabaryo dembiyadiisa aawadood, Haaruun qaadan lahaa labada orgi wayna saami riteen. Mid ka mid ah ariga loo qoondeeyey lahaa sida Casaaseel. Hal orgi waxay ahayd in la gowraco qurbaanka dembiga ah. Waa maxay sababtu?
“Markaas waa inuu gowracaa orgigii dadka loogu bixinayo qurbaan dembi, oo uu dhiiggiisana ilxidhka soo geliyaa, oo orgiga dhiiggiisana waa inuu ku sameeyaa siduu ku sameeyey dhiiggii dibiga oo kale, oo uu ku saydhsaydhaa daboolka dushiisa iyo hortiisaba. 16 Oo isagu waa inuu meesha quduuska ah daraaddeed kafaaraggud ugu sameeyaa dadka reer binu Israa’iil waxyaalahooda nijaasta ah iyo xadgudubyadooda oo ah xataa dembiyadooda oo dhan aawadood, oo sidaasoo kalena waa inuu u sameeyaa teendhada shirka oo iyaga la deggan waxyaalahooda nijaasta ah dhexdooda.”
Oo maxaa ku dhacay Casaaseel?
“Oo markuu dhammaystiro kafaaraggudka uu u samaynayo meesha quduuska ah, iyo teendhada shirka, iyo meesha allabarigaba waa inuu orgiga nool keenaa. 21 Oo markaas Haaruun waa inuu labadiisa gacmoodba kor saaraa madaxa orgiga nool, oo waa inuu korkiisa ku qirtaa xumaatooyinkii reer binu Israa’iil oo dhan iyo xadgudubyadoodii oo dhan, oo ah xataa dembiyadoodii oo dhan, oo waxaas oo dhan waa inuu kor saaraa orgiga madaxiisa, dabadeedna waa inuu cidlada ugu diraa nin diyaarsan. 22 Oo orgiguna xumaatooyinkoodii oo dhan wuxuu u qaadayaa dhul cidla ah, oo markaas waa inuu orgiga ku sii daayaa cidlada dhexdeeda.”
Allabariga iyo dhimashada dibiga wuxuu ahaa dembi Haaruun isaga uun u gaar ah. Allabariga orgiga kowaad wuxuu ahaa dembiga dadka reer binu Israa’iil. Haaruun ka dibna ku ridi lahaa gacmihiisa madaxa ka Casaaseel nool iyo – sida calaamad – dembiyadii dadkana wareejiya galana Casaaseel. Ariga ayaa waxaa ka dibna la sii daayay oo cidla ay tageen sida calaamad u tahay in dembiyadii uu dadkii waxay iyagoo haatan ka fog dadka. Iyadoo allabariyaddan kuwan dembiyadooda oo dadkuna. Tan oo dhan waxaa la sameeyay sanad kasta maalinta kafaaraggudka.
Qaalinta, ama Saca Al-Baqarah iyo Tawreedka
Haaruun ayaa sidoo kale allabaryo kale si ay u sameeyaan oo ay ku jiraan allabariga qaalinta (Sac dumar ah halkii dibi lab). Waa qaalintan aadka iyo allabariga oo sabab u yahay horyaalka Saca ee Surah 2. Sidaas Quraanka wuxuu ka hadlayaa si toos ah xayawaankan. Riix halkan in aad akhrisid Quraanka. Sida aad arki kartid, dadkii waxay iyagoo ka argagaxay oo wareersan markii lagu amray in sac (waxay tahay dhedig) waxaa loo isticmaali tan allabarigii iyo aan ahayn xoolaha caadiga ah lab. Oo waxay ku dhammaanaysaa
“Waxaan ku nidhi ku garaaca kan la dilay Saca qaarkiisa, saasuuna u nooleeyaa Eebe wixii dhintay, idiinna tusin aayaadkiisa si aad wax u kastaan.”
Suurat Al-Baqarah 2:73 – Saca
Sidaas waxaa sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah Calaamadaha oo aynu u baahanay in aan siino fiiro gaar ah. Laakiin sidee bay qaalintu ku tahay calaamad? Waxaan akhriyey in ay leedahay in la sameeyo geeri iyo nololba. “Dhawdahay laga yaabaa in aan fahmo” sida aynu ka baran karno tilmaamaha asalka ah in Tawreedka la siiyay Haaruun uu ku saabsan yahay allabarigii. Riix halkan si aad u aragto marinka buuxa ee Tawreedka. Waxaan aragnaa in
“ Oo waa in qaalinta hortiisa lagu gubaa. Haraggeeda, iyo hilibkeeda, iyo dhiiggeeda, iyo uuskeedaba waa in la wada gubaa. 6 Oo markaas waa in wadaadku soo qaadaa qoryo ah geed kedar la yidhaahdo, iyo husob, iyo wax guduud ah, oo waa inuu ku dhex tuuro dabka qaalintu ku gubanayso.” (Tirintii 19:5-6)
Geed husob la yidhaahdo ayaa ahaa laan ka geed caleen gaar ah. Ahayd Kormaridda markii reer binu Israa’iil waxay ahaayeen in rinjiga dhiigga wanka Kormaridda albaabada ay si dhimasho mari lahaa ay ku amray inay ka badan
“Waxaad qaadataan xidhmo geed husob ah, oo waxaad dartaan dhiigga ku jira xeedhada, oo albaabka fayaaraddiisa sare iyo labada dhinac oo fayaaradda ah ku taabsiiya dhiiga ku jira xeedhada; oo midkiinna ilaa waagu ka beryo yuusan albaabka gurigiisa dibadda uga bixin.” (Baxniintii 12:22)
Geed husob la yidhaahdo waxaa mar kale loo isticmaalo qaalinta, iyo qaalinta, geed husob la yidhaahdo, iyo suufkayga, iyo qori kedar ah ayaa la gubay ilaa waxaa dambas oo kaliya tagay. Markaasuu
“Oo markaas nin daahir ahu ha soo ururiyo qaalinta dambaskeedii, oo meel xerada dibaddeeda oo nadiif ah ha dhigo, oo shirka reer binu Israa’iil ha lagu dhigo biyaha nijaasta daahiriya; waayo, iyadu waa dembi qurbaankiis.” (Tirintii 19:9)
Sidaas dambaska ayaa lagu daray ‘biyaha daahirinta’. Qof nijaas oofin lahaa ashuuno uu (Dhaqidda dhaqan ama waysoshadda Umaddeed) si loo soo celiyo nadaafad la isticmaalayo dambaskan qaso biyo. Laakiin dambas ay yihiin kuwo aan wasakh oo kasta laakiin ah nooc gaar ah.
“Oo kii qof meyd ah taabta intii toddoba maalmood ah ayuu nijaas ahaan doonaa. 12 Oo kaasu waa inuu maalinta saddexaad isku daahiriyaa, oo maalinta toddobaad isagu daahir buu ahaan doonaa; laakiinse haddaanu maalinta saddexaad isdaahirin, markaas maalinta toddobaad daahir ma uu ahaan doono. 13 Oo ku alla kii qof dhintay meydkiis taabta oo aan isdaahirin, kaasu wuxuu nijaaseeyaa Rabbiga taambuuggiisa, oo qofkaasu wuu ka go’i doonaa reer binu Israa’iil, maxaa yeelay, isaga laguma rushayn biyaha nijaasta daahiriya, oo isagu nijaas buu ahaan doonaa, oo nijaasnimadiisa ayaa weli saaran.”
Tirintii 19: 11-13
Sidaas daraaddeed kuwanu dambas, qaso biyo, ahaayeen waysosho Umaddeed (waxay ahayd waysosho dhaqameed) marka qof uu ku jiray ka qof dhintay meydkiis nijaas buu ahaanayaa. Laakiin waa maxay sababta taabashada lahaa natiijo jidhka ku dhintay sida wasakh oo daran? Ka fikir waxa ku saabsan! Aadan ayaa laga sameeyey wax dhimanaya sababtoo ah xadgudubkiisa, iyo caruurta oo dhan (aniga iyo adiga!) Sidoo kale. Sidee tahay dhimasho waa nijaasaysan yahay, sababtoo ah waa natiijo ah oo dembi – waxaa la xidhiidha waxyaalaha nijaasta ah ee dembiga. Qof nin dhintay meydkiis ka dibna waxay sidoo kale noqon lahayd nijaas.
Laakiin dambas kuwanu waxay ahaayeen Calaamad – in iska maydh lahaa wasakhnimadan. Qofka nijaasta ah, dhintay isagoo ‘nijaasta ahaa’,heli lahaa ‘nolosha’ daahirinimadiisa dambaska Qaalinta.
Laakiin waa maxay sababta dhedig xoolaad loo isticmaalay oo aan lab? Lagama bixin wax sharaxaad toos ah laakiin waxaan ku firi karnaa Qorniinka. Intii Luuxul Maxfuudka ah, Tawreed iyo Zaboor (Oo dhan, Qorniinka oo kale) Ilaah ayaa shaaca ka qaaday qudhiisu sida “Waxa uu ahaa Isagu’ – ee jinsiga lab. Oo quruun reer binu Israa’iil waa la hadlay oo wadajir ah ” ayay ‘ – in jinsiga ah dumar. Sida xiriirada nin naagta guurka, Ilaah keenay iyo kuwa raacayna u jawaabeen. Laakiin hindisaha mar walba Ilaah ahaa. Waxa uu bilaabay in ay amarka Ibraahim in uu wiilkiisa huro; Waxa uu bilaabay in uu Siiyay Amar ku qornaa looxa; Waxa uu bilaabay xukunka Nuux, iwm .. Marnaba ma ahayn aadanaha (Nebi ama haddii kale) fikradda in la bilaabo – taabacsan kaliya soo gudbiyo si uu u hogaaminaya.
Dambaska qaalinta waxay ahaayeen in ay la kulmaan baahida loo qabo in aadanaha – in wasakh. Taasoo ah inay ahaadaan calaamad habboon ee aadanaha u baahan yahay, xoolaha la bixiyey wuxuu ahaa dhedig. Tani waa wasakhda oo dhibcood si ay ceeb aan u dareeno marka aan dembaabo, ma’ahan dembiga aan Ilaah agtiisa ku leenahay. Marka aan dembaabo, ma’ahan oo kaliya in aan jebiyey oo waxaan ahay mid eed leh xaakinka hortiisa, laakiin sidoo kale waxaan dareemayaa ceeb iyo shaleyte. Sidee Ilaah u bixiyaan ceebteenna ugu dhammaado? Marka ugu horreeysa, Ilaah waxa uu bixiyey dharka dadka astura. Aadamihii ugu horeysay heshay dharka maqaarka inuu cawradooda iyo ceebtooda daboolo. Oo caruurtii Banii Aadan tan iyo mar walba isku qariyay jirkooda dhar – dhab ahaantii waa arin aad u ah dabiici caadi ah in la sameeyo si dhif ah waxaan si loo joojiyo si aad u weydiiso ‘sababta?”. Kuwani biyaha ku nadiifiyey ka qaalinta ahaa hab kale si aan u dareemi karo ‘nadiif’ ka wax inaga sumayn. Ujeeddada qaalintu ku jiray uu inaga nadiifiyo.
“Taas daraaddeed aynu ugu soo dhowaanno qalbi run ah iyo hubaal rumaysad, iyadoo qalbiyadeenna laga nadiifiyey niyo shar leh, jidhkeennana lagu maydhay biyo daahir ah.” Cibraaniyada 10:22
Taas waxaa ka duwan, allabarigii orgidii Maalinta kafaaraggudka wuxuu ahaa ugu horrayn Ilaah, sidaas aawadeed xayawaan lab ah ayaa loo isticmaalay. Iyadoo Calaamada ee Tobanka Amar, waxaan xusay in rigoore u dheceen xadgudubka waxaa si cad oo si joogta ah cayimay sida dhimashada (riix halkan si aad u hubiso marinnada/qaybaha). Ilaah wuxuu ahaa (oo uu yahay!) Garsooraha iyo sida xaakimka dalbaday in la dilaa. Dhimashada dibiga labka ugu horeysay wuxuu la kulmay shuruuda Ilaah in dhimashada loo bixiyo dembiga Haaruun. Markaas dhimashada orgiga ugu horeysay ee labka ah wuxuu buuxiyay shuruuda Ilaah in loo dilaa dembiyada reer binu Israa’iil. Markaas dembiyadii uu bulshada reer binu Israa’iil laga yaabaa in lagu rakibaa calaamada Casaaseel ee Haaruun, iyadoo sida Casaaseel la sii daayay oo cidla ah tageen, waxay ahayd calaamad u taagan in dembiyadii bulshada ayaa la sii daayay.
Allabariyadani waxaa u dabaal degay Haaruun iyo faraciisa in ka badan kun sano. Inta taariikhda reer binu Israa’iil dalkii iyaga la siiyay; markaas Dawood (ama Daawuud) ayaa noqday Boqor iyo sidoo kalena wiilashiisii ​​ayaa bedelay isaga; markii nebiyo badan oo la farriim ahi la yimaadeed digniinyo dadka uga digaya dhaqanka ee shaydaanka; xitaa iyada oo loo marayo nolosha Ciise Masiix (NNKH) allabariyadan ayaa la sameeyey si loo daboolo baahida kuwan.
Sidaas aawadeed Calaamadaha ugu dambeeyay ee Muuse iyo Haaruun, fariimaha Tawreedka ayaa ku soo dhowaanaya dhamaad. Markiiba nebiyo ka dambeeyay ayaa imaanaya oo Zabuur waa sii wadi doonaa fariimaha ka imaanaya Ilaah. Laakiin marka hore waxaa ka mid ah farriinta kama dambaysta ah ee Tawreedka. Nebigii Muuse (NNKH) u sii socotay inay fiiriyaan mustaqbalka soo socda ee Nabiga, iyo sidoo kale fiiri in barakada iyo inkaarta mustaqbalka ee faraca reer binu Israa’iil. Kuwan waxaynu ku eegnay waxbarashadeenii la soo dhaafay ee Tawreedka Ilaaheenna.
Tags:allabaryada HarunBaqarahHarun iyo MusaHarun iyo sanduuqii axdigaHarun nebigaMaxaad Harun samayn Maalinta kafaaraggudkaMaxaad Harun sameeyo yow Kippurmaxay ahaayeen calaamooyinkii Haaruunmaxay ahayd qaalinta Quraankaoo la Harunsababta oo ahaa nin nebi ah oo Harunsharax Suurad lo'dasharxaya Surah 2Suurad BaqarahSuurad lo'dawaa maxay Suurad 2 oo ku saabsanwaxa uu ahaa lo'da ee Quraanka